Iwo madiki emabhirioni munyika - vhidhiyo - teles relay
Iwo mudiki mabhirioni munyika - vhidhiyo
➤ Shanyira yedu Webhusaiti: http://lamafache.tv ✅
Vakapfuma uye vakakurumbira, ivo vari pakati pevanhu vakapfuma kwazvo pasi. Nekudaro, mukuwedzera kune hupfumi, ivo vese vane chinhu chimwe chete zvakafanana: pwere. Nekuti chaizvo, vanhu vatichazotaura nezvavo nhasi vese vari pasi pemakore makumi mana. Saka nhasi tiri kuzowana pamwechete kuti vanaani vadiki vemabhiriyoni pasi pano!
Bhalisa kune chiteshi: https://goo.gl/KOb7Ns
Tsvaga isu paFB: https://www.facebook.com/lamafachetv/
Nezve copyright zvinhu tumira email ku: contactlamatv@gmail.com
Iyi vhidhiyo yakatanga kuonekwa pa https://www.youtube.com/watch?v=lewr8DUK90k
argentnzira yekupfumakuita mariDubaivanavana dubaivana vakapfumaForbes
Zvinogona kunge zviri 2020, asi zvakanakisa Roku kupa kweiyo yeChishanu Chishanu 2019 ichiripo - BGR
Nick Gordon anofa; kupomerwa mhosva yekufa kwaBobbi Kristina Brown - vanhu